China Kids Skisuit စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Senlai
နှင်းလျှောစီးဝတ်စုံသည်ကလေးများအတွက်လှုပ်ရှားမှုအတွက်သင့်တော်သည်။ ဥရောပနိုင်ငံများသို့ရောင်းချခြင်းသည်စားသုံးသူများကြားရေပန်းစားသည်။ ထည်ပေါ်တွင်ဥရောပ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှု၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။
1. အဝတ်အစားအ ၀ တ်အစားများသည်ကလေးများ၏ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအတွက်သင့်တော်သည်။ ဥရောပနိုင်ငံများသို့ရောင်းချခြင်းသည်စားသုံးသူများကြားတွင်ရေပန်းစားသည်။ ထည်ပေါ်တွင်ဥရောပ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှု၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံ၊ ကျွမ်းကျင်သောဒီဇိုင်းအဖွဲ့ရှိသည်။ ကျွမ်းကျင်သောအလုပ်သမားများပါ ၀ င်သည်။ အသေးစိတ်ကိုအလေးအနက်ထားပြီး the ည့်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်။
3.we က 100% polyester fiber ကိုအသုံးပြုဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ပစ္စည်းကိုဝါဂွမ်းဖြင့်ဖြည့်ထားသည်။ ပစ္စည်းသည် ၂၁၀ တန်ဖြစ်သည်။ အိတ်ဆောင်ပါးစပ်တွင်းရှိ MAO နှင့်ရောင်ပြန်ဟပ်သည့်ဆောင်းပါး၊ ရေစိုခံဇစ်နှင့်သတ္တုခလုတ်များပါသည့်ပခုံးများသည်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းတံဆိပ်ရှိသည်။ အပေါ် clasp ။
4. အဝတ်နှင့်ခြေဖဝါးတွင်လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းရှိပြီးခြေထောက်တွင်ခြေနင်းပါ ၀ င်သည်။ သန့်ရှင်းရေးညွှန်ကြားချက် - ဆေးကြောခြင်းမပြုလုပ်မီအတု ၀ တ်ချွတ်များကိုဖယ်ရှားပါ၊ အရောင်ချွတ်စက်သို့မဟုတ်ပျော့ပျောင်းသောထည်ကိုမသုံးပါ၊ နောက်ကျောခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့ခြင်းအကွက် (40 ℃အထိ) ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ အဝတ်လျှော်ပြီးနောက်လေထဲသို့ထုတ်ယူပါ။ အပူချိန်နိမ့်ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်းသန့်စင်ခြင်းများမပြုလုပ်ရန်၊ အညစ်အကြေးမသန့်ရှင်းစေရန်၊ လေမှထုတ်ယူပါ။ လှပသောအသွင်အပြင်ရှိရုံသာမကရေစိုခံ၊
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းမှအထည်အလိပ်မှအရည်အသွေးကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထိန်းချုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ထံအပ်နှံထားသောဝန်ထမ်းများရှိသည်။ ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးကျေးဇူးရရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ခြင်းမှကြိုဆိုပါသည်။
ရှေ့သို့ Kids PU မိုးကာအင်္ကျီ